Nampidirin'i radotiana | 13 Aog, 2006
Andian-tsarina omby vongana miisa 100 mahery no ampirantiana eny amin'ny arabe, parc ary toerana falehan'ny be sy ny maro ao amin'ny tananan'i Denver, Colorado (USA). Tsidiho ny Cow Parade raha te hahalala misimisy kokoa mikasika azy ity ianao.
Nandalo tany Denver aho ny alakamisy lasa teo ka ireto misy sary vitsivitsy nalaiko izay mba tiako ho zaraina aminareo. Mijere finaritra.
Lohateny: San Luis Valley Cow
Lohateny: Village Cow
Ity angamba no tena hoe "Omby Vola" aminy :-) )
Tsy dia nanantena hahita vola gasy aho saingy ...
Lohateny: Cow Stamp(ede)
Lohateny: Identity Crisis
Lohateny: It's your moove
Lohateny: Aspen Eyes
Lohateny: Alpine Explosion
Lohateny: Bovine Beauty
Lohateny: Mavine Muse
Lohateny: Cow Town USA
Ity farany ity indray kosa dia mba tsetratsetra tsy aritra teny andalana teny fotsiny.
Lohateny: Gossip - Mifosa
Mety ho izany tokoa ve?
Nampidirin'i radotiana | 5 Jol, 2006
Anisan'ireo liana amin'ny tantara fahagola mikasika an'i Madagasikara aho ary dia nampihaonin'ny kisendrasendra tamin'ity vazaha amerikana iray antsoina hoe David Halvorson iray volana lasa izay. Nanao fampisehoana fampahafantarana an'i Madagasikara teto amin'ny tanana izahay tamin'izay fotoana izay no nipoitra tampoka avy any i David ary tonga dia nampiresaka be ny amin'ny momba an'i Dago.
Izay mipetraka aty ivelany moa dia azoko antoka fa efa sendra an'ireny vazaha ohatran'ny (miseho) mahalala an'i Madagasikara noho ny gasy ireny. Tamin'ity indray mitoraka ity aloha dia tsy maintsy nisapaoritra aho fa dia tena mahalala betsaka momba an'i Dago noho izaho izy eh.
Ny dadan'ny dadabe sy bebeko antsoina hoe Peter C Halvorson sy Antonette Nilsen Halvorson izay samy teraka sady lehibe tany Madagasikara hoy izy no anisan'ireo misionera voalohandohany nitondra ny fivavahana Loterana tany Madagasikara.
Nanoratra boky i Antonette Nilsen Halvorson izay renin'ny dadabeko hoy ihany i David Halvorson. Ny tantaram-piainany tany Madagasikara no voarakitra ao anatin'io boky io. "Loharano" no lohatenin'ilay boky izay voatonta voalohany tamin'ny taona 1948. (io amin'ny sary eo ambany io ny fonony). Ity indray kosa ny ISBN 0-9726655-0-1 hoan'izay liana.
Izaho moa izany tsy mbola naheno ny fisian'io boky io mihitsy dia tena tsy nanan-kandahatra firy fa dia ny hoe "mahafinaritra izany, sns..." no tadidiko voateniko matetitetika. Vita ny resaka dia lasa i leiry. Tsy tadidiko hoe afaka adin'ny firy anefa fa ohatran'ny vetivety kely dia iny indray i ra David fa niverina sady nanolotra ahy ilay boky.
Na dia tsy Loterana aza moa ny tena dia tsy andriko izay hodiana hamakiana azy milamina taty antrano nony hariva. Mahaliana ahy foana mantsy ny mamaky ny zavatra soratan'ireny vahiny nipetraka na nandalo tany Dago ireny. Ity indray mitoraka ity moa dia hoe nosoratan'olona niaina tamin'ny andro faha mpanjaka mihitsy.
Betsaka ny zava-baovao tamiko tao anatin'ilay boky amin'ny ankapobeny na dia hita hoe mirona kokoa amin'ny resaka fivavahana aza ny zava-boalaza ao anatiny. Ny fiainan'izy ireo tao Betafo, Antsirabe ary Fort Dauphin moa no tena voaresaka ao. Nisy ampahany ihany koa mikasika an'Antananarivo. Nilaza moa i Antonette Nilsen Halvorson, izay mpanoratra fa anisan'ireo nanatry maso teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fanosorana an'i Ranavalona III ho mpanjakan'i Madagasikara izy tamin'ny taona 1883. Hoy mantsy izy hoe " ... The last queen of Madagascar - Ranavalona III - was crowned in the year 1883. I was there that day."
Tantarainy antsipirihany ny zava nitranga tamin'io andro fanosorana ho mpanjaka an' i Ranavalona III io. Anisan'izany ny fianjeran'ny satroboninahitry ny mpanjaka tamin'ny tany raha izy ndeha hiakatra teo ambony kalesy taritin'ny soavaly fotsy hiseho vahoaka iny. Inoako hoy izy fa mbola tsy nitarika kalesy mihitsy ity soavaly fotsy natao hitarika ny kalesy hotaingenan'ny mpanjaka ity fa vao ndeha hiakatra teo amboniny i Ranavalona III dia nitroatra tampoka ilay soavaly ka nahatonga ny satroboninahitra teny andohan'ny mpanjaka hilatsaka tamin'ny tany. "Fambara ratsy iny fa tsy hijanona ela eo amin'ny fanjakany izy" hoy hono izany lehilahy iray sendra teo akaikin'ny mpanoratra tamin'izany andro izany. . Afaka nitaingana ilay kalesy ihany moa izany ny mpanjaka nony avy eo ary dia nahita azy ny olona izay nanatrika. 22 taona hoy izy Ranavalona III tamin'izay. ... Votsitra teny antanany tokoa ny fanjakany 12 taona taty aoriana nony tonga ny mpanjanaka Frantsay tamin'ny taona 1895. Tantara efa diso fantatsika daholo ireo fa mba tsetsatsetsa tsy aritra fotsiny ny ahy.
Miala tsiny fa ohatran'ny hoe nivoana be ny resaka fa ity no tena antony nanosika ahy hanoratra ity ampahany androany ity. Rehefa namaky an'io boky "LO-HA-RA-NO" (The water spring) io aho dia sendra ity taratasy fanendrena hiasa (hampianatra raha ny marina kokoa) nomen'ny governora ireo mpampianatra vaovao voaofana tao Fort Dauphin hiparitaka hampianatra tany amin'ny foko Tanosy.
Io ambany amin'ny sary io ny zavatra voalaza tao anatiny. Jereo tsara fa 'N.N.,' no nasolo ny toerana anoratana ny anaran'ny olona voatendry. Ary mbola 'N.N.' ihany koa no nasolo ny anaran'ny toerana hanendrena ilay mpampianatra.
Aleoko tonga dia mitsotra fa tsy arako na mbola fampiasa amin'ny teny anglisy amin'izao io na hoe teny efa tsy fampiasa intsony fa ohatran'ny alaim-panahy aho hieritreritra hoe mety ho io fomba fanoratra io no niavian'ny fiteny ankehitriny hoe " any ananona" sy ny hoe "ranona".
Raha vakina ilay litera anakiroa dia ohatran'ny hoe [aen, aen] no mety hamakiana azy. Inoako fa rehefa ela nampiasana azy ny gasy tamin'izany andro izany dia niova kely ny fanononana ilay litera "N" amin'ny teny anglisy dia mety lasa novakiana hoe [an,an] ilay hoe 'N,N'. Ny hoe ranona indray moa dia mety vokatry fametrahana ny hoe "ry" teo anoloan'ilay 'N, N'.
Tsy mandala na mianatra ny teny Malagasy aho ka tsy afaka manome porofo ny fahamarinam-pototr'ireo fanazavana arosoko ireo fa dia ho raisiko antanandroa izay afaka mitsipaka na manohana azy.
Tsetsatsetsa tsy aritra faraparany:
I Nil Nilsen sy John Engh no nitondra ny fivavahana Loterana tany Madagasikara. Ny taona 1866 izy ireo no nandao an'i Norway ary niondrana antsambo lay vita tamin'ny hazo nantsoina hoe "ELIESER" ary nihazo ny nosy Madagasikara. Tadiaovo ilay boky hoan'izay mbola te hahalala misimisy kokoa Eh.
Misaotra anao namaky hatramin'ny farany.
UPDATE: ( Sept 13, 2006)
Araka ny fangatahan'i Mialina dia indro arosoko eto ny fizahan-takelak'ity boky LO-HA-RA-NO ity:
Ity ambany indray kosa ireo pejy roa nangatahinao izay milaza ny fahitan'ny mpanoratra ny zava niseho teo Mahamasina tamin'izany fotoana izany.
Nampidirin'i radotiana | 21 Jio, 2006
Mba nandeha nihodina tany amin'ny ville tany izahay gasy vitsivitsy teto amin'ny tanàna tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Sendra ireto sary hosodoko vita amin'ny tsaoka fanoratana amin'ny solaitra be ireto izahay ka tena nivanaka (impressed). Ny tena nampivanaka azy ankoatran'ny fahaizan'ny artista maromaro izay nifaninana teo nandritra ny roa andro dia ny toerana nanaovana ilay hosodoko sy ny fitaovana nampiasaina. Arabe fandehanan'ny vam io no nanaovana ny sary. Vita amin'ny béton moa ny betsaka aty aminay amin'izao. Tsaoka (la craie ozy isika gasy) miloko isankarazany no nampiasaina. Ireo ny santionany tamin'ireo tena mba tsy aritro. Soa ihany fa nitondra fankan-tsary aho tamin'io. Tiako hozaraina hoan'ireo izay mbola tsy nahita. Ny mampalahelo dia efa tsy misy intsony ireo sary hosodoko ireo ankehitriny satria ny alatsinainy lasa teo ihany dia efa nivalona ho tantara . Tsy maintsy sokafana hoan'ny fifamoivoizana tsinona ny arabe :-(( too bad...
Tsy izahay mitsam akory io azo sary mijoro eo io an.
Ity no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fahaizana mampiasa loko marevaka.
Azoko tamin'ny tsy nampoizina
Nampidirin'i radotiana | 20 Jio, 2006
Tamin'ny fotoana tsy nampoiziko no nahatonga ahy ho voapetaka ny anarana hoe Rado. Roa taona lasa izay, ndeha hiverina hody aty Amerika rehefa avy nanao vacances iray volana tany Dago aho. Izaho irery moa no nandeha tany tamin'io fotoana io. Ny alina mialoha ny andro niaingako dia mba niangavy ahy ny zaobaviko (Farah no anarany) hoe ndao mba hanalanala azy kely any amin'ny ville (Analakely) rehefa avy miasa vao mody. Ndao ary hoy aho tsy sarotiny. Efa ho sivy taona aho izay no nipetraka taty amin'ny bekintana. Azo lazaina ho naniry faka aty raha ny tena marina saingy tsy mahafoy ny an'ny tena ihany koa ka dia miezaka ny hamangy an'i Dago indray mandeha isan-taona. Hitako tsara mihitsy ny fiovaovan'ny ao Madagasikara tao anatin'izay sivy taona nivezivezeko teo izay. Ao ny fiovana tsara ao ny fiovana ratsy. Fiovana tsy azo nihodivirana daholo anefa ireny fa tsy maintsy nitranga araka ny fahitako azy. Teo amin'ny Arcade Analakely no fotoanako sy Farah zaobaviko tamin'izay hariva izay. Mbola azo irevirevena labiera,... hampiderana vam, teny tamin'io. Asa na mbola navelan'ny fivondronana io amin'izao fotoana izao. Hitako tamin'ny gazety mantsy taty aoriana fa toa hoe nanomboka tezitra ny mpitondra fa mandoto tanàna izay tsy izy ireo mpirevy mivoaka alina sy ireo mpivarotra amoron-dalana mamalifaly azy ireo manoloana ny arcade iny.
Tonga tokoa ary i Farah rehefa avy niasa ny hariva dia tapakevitra izahay rehefa avy nihainohaino nijery ny zava-misy teo fa ndeha hihinana glace kely aloha. Teny andalana hiakatra hoany andohan'Analakely iny , tsy lavitra ny Hotel Glacier izahay no nifanena tampoka tamin'izay jo be haingo be izay. Nahafantatra an'i Farah izy ka tsy nisy fika nialana fa dia voatery nijanona kely teo aloha izahay niresaka. Raikitra ny fampifankafantarana. Tsy haiko na taiza no nahazoan'i Farah an'izany anarana hoe Rado izany fa ohatran'ny tonga dia nandeha hoazy tao ambavany ny nanondro ahy sady niteny hoe "Rado, vadin'ny zokiko". Misy zavatra tsy mazava izy izany hoy aho tany antsaiko tany fa nahoana no lasa Rado fotsiny teo ny anarako. Nilaza moa ilay jo fa hoe " Nirina no anarany. "Faly mahalala" hoy aho. Ny zavatra tsy azoko dia tampoka teo dia hoe hanaraka anay hihinana glasy koa hono izy. Niera tamiko moa i Farah sady niteny hoe " ahoana tsy maninona ve raha miaraka amintsika izy?" "tsy maninona" hoy aho tsy naka sarotra sady nieritreritra fa mety mba mila namana koa angamba i Farah fa tsy dia azony ny ainy hoe izahay roa irery no ho hitan'ny olona mandeha eran'Analakely. Be resaka be i Nirina ary ohatran'ny be fanadihadiana be izany ny momba ahy. Sahirana aho aloha tamin'ny voalohany nizatra ilay anarako vaovao. Nisy fotoana mantsy izy niantso hoe " ary i Rado ve...." dia izaho tsy namaly. Tsy tadidiko hoe izaho no iantefan'ny resany hay. I Farah efa mangalam-pijery any amiko vao "cope" aho hoe mila valiana haingana izany resaka izany fa ialahy ry "Rado" no iantefany.
Niverina tany Dago indray aho tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity ary nandeha tany Fianarantsoa fa avy any mantsy ny rafozako. Ndeha handefa email tamina cybercafe iray aho no nisy olona henoko niantsoantso hoe "Rado, rado,.." tsy dia lavitra teo. Tsy nihotsina mihitsy aho aloha ela ela. Tsy tadidiko hoe izaho anie ilay "Rado" antsoiny. Nanatona mihitsy izy nony farany sady nokitihiny aho. "Rado" hoy izy. "Oviana elah no tonga". Gaga be aho nahita an'i Nirina. Tena ity ilay jo tamin'ny taona lasa hoy aho aneritreritra fa tena tadidiny aho. marina. Kely koa moa izay cybercafe tao Ampasambazaha izay ka tena naheno ny antsony daholo ny olona sady be koa ny nihainohaino niandry toerana hisokatra teo. Any aminay daholo ny mason'ny olona satria izy dia tena ireny be paozy miavaka be ireny. Somary "eccentric" kely raha ho ahy tia zavatra tsotsotra. Tsy fantatro koa na fantatry ny olona izy fa ohatran'ny hafahafa izany ny fijerin'ny olona manodidina. Voatery nilalao ilay anjarako hoe "Rado" indray aloha aho izany sady nitady fika hivoahana haingana tao amin'ilay cybercafe araka izay azo atao. "Ity ny laharan'ny findaiko" hoy izy "dia antsoy aho fa mba te hiaraka aminao." " Misaotra fa voaraiko ity" hoy aho sady lasa aho namonjy ny varavarana hivoaka rehefa avy nanao veloma azy.
Tsy afaka intsony anefa ilay anarana hoe Rado satria rehefa manoratra hoan'ilay zaobaviko aho dia lasa Rado no iantsony ahy. Mety anarana kofa sipany taloha ary ve izany Rado izany sa anarana mba tiany homeny anjanany any aoriana sa dia hoe anarana mahafinaritra ny sofiny tsotra izao. Izy moa tsy mety mamaly hatrany na dia efa napetrako mivantana taminy daholo ireo fanontaniana ireo fa dia ny hoe " Izay fotsiny no anarana nifanandrify ny vavako tamin'iny fotoana iny dia izay fa tsy misy zavatra hafa ifandraisany amiko" no avaliny ahy foana. "Sipa mihodina mantsy iny Nirina iny ka tsy tiako ho tena fantany ny anaranao." hoy izy. "Tafaraka taxi-brousse ndeha hiakatra hoany Tana izahay indray mandeha dia izay no nahafantarako azy". hoy ihany izy nanohy. " Hay ve hoy aho" tsy te hanadihady betsaka intsony na dia tonga saina aza mandinika ny fahasahisahian'i Nirina. Mety ho hitany ve izao ity zavatra nosoratako momba azy ity? ...Azoko antoka fa tsy maintsy mbola hifanena tampoka amin'i Nirina aho indray andro any dia ho hita eo izay tohiny. Enga anie mba ho tadidiko foana fa izaho no Rado.
Post ao anatin'ny Ankapobeny | Hevitra (12) | Verindrohy (trackback) (0)
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11